Fividianana tombony 5 malaza indrindra eto amin'ny tontolon'ny Naruto - Pop-Kolontsaina
Fividianana tombony 5 malaza indrindra eto amin'ny tontolon'ny Naruto
Ny matanjaka indrindra ao Konoha ihany no mahazo ny anaram-boninahitra Hokage ao amin'ny Universe Naruto. Na dia manana shinobi matanjaka be foana aza i Konoha hatramin'ny namoronana azy, vitsy ny beena izay nahavita naneho ny fahalalahana sy ny finiavana mendrika ny mpitondra.
Konoha no tanàna voalohany nipoitra tao amin'ny tontolo Naruto. Hatramin'izao, Konoha dia nahita Hokages fito.
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia maneho ny fomba fijerin'ny mpanoratra.
Vakio ihany koa: ny crossovers Fortnite 5 ambony tadiavin'ny mpilalao ao amin'ny Toko 2 - Andiany 5
Ny Hokages matanjaka indrindra amin'ny tontolon'ny Naruto
Ny zandrin'i Senju dia Hokage faharoa an'i Konoha. Na dia shinobi fampiasa amin'ny rano aza izy dia nahavita nifehy ny fanovana elemika dimy rehetra tao amin'ny Universe Naruto.
Izy no tompon'andraikitra tamin'ny famoronana ny Akademia Konoha, izay hahazoan'ny tanora shinobis fanabeazana fanabeazana. Izy koa no namorona ny Polisy Konoha. Tobirama dia namorona Ninjutsus tena matanjaka - ny sasany dia voarara, noho ny toetr'izy ireo maizina.
Ity olona ity no Hokage fahatelo an'i Konoha. Nandritra ny fahazazany, Sarutobi Hiruzen dia noheverina ho Andriamanitr'i Shinobi. Noheverina ho matanjaka noho ireo teo alohany izy, fa ny tanjaka sy ny fahaizan'ny zokiny taloha dia tsy naseho nanerana ny sarimiaina.
Na izany aza, ny tsirairay Naruto nerd dia hahatsiaro ny tolona nataony tamin'i Oorochimaru, Edo Hashirama ary Edo Tobirama.
Vakio ihany koa: Crossovers anime Fortnite 3 voalohany izay mety ho lasa zava-misy
Ny Flash Flash an'ny Konoha dia iray amin'ireo shinobis matanjaka indrindra tamin'ny fahavelony. Nandresy samirery ny fitehirizan'ny shinobi izy nandritra ny Ady Ninja Lehibe Fahatelo tao amin'ny Universe Naruto, nahatonga azy ho iray amin'ireo shinobi matanjaka indrindra tamin'ny fotoana rehetra.
Na dia nanana fotoana fohy aza i Namikaze Minato tamin'ny naha Hokage azy tao amin'ny Universe Naruto, tsy nisy afaka nifanaraka tamin'ny hafainganam-pandehany sy ny fahaizany. Maty izy rehefa niady tamin'i Obito sy Kurama, fantatra ihany koa amin'ny amboahaolo sivy sivy, izay biby matanjaka indrindra amin'ny rambony rehetra eto amin'ny tontolon'ny Naruto. Na dia nianjera tamin'ny ady aza izy dia mbola nahavita niaro ny tanàna tsy ho voarohirohy.
Ny olom-pirenen'i Konoha dia niantso azy hoe Lord First ho fanajana. Hashirama dia ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao an'i Asura, zanaka faralahin'ny Sage of Six Paths. Na dia olona mandeha mora foana aza izy dia iray amin'ireo shinobis matanjaka indrindra ao Konoha, ary mpampiasa style hazo.
Izy dia iray amin'ireo shinobi vitsivitsy nahay ny maody Sage, izay nanatsara ny heriny. Afaka naka an'i Madara Uchiha irery izy, izay milaza betsaka momba ny tanjany amin'ny maha shinobi azy.
Vakio ihany koa: Lazarbeam manazava ny antony manimba Fortnite
Ny Hokage fahafito an'i Konoha sy ny Jinchuriki ho an'ny Kurama, Naruto no shinobi matanjaka indrindra any Konoha. Nahazo tahiry chakra goavambe izy, noho i Kurama voaisy tombo-kase ao anatiny.
Nahatratra ny akanjon'i Hokage tamin'ny fahazazany izy, ary amin'izao fotoana izao dia inoana fa afaka mamafa tanàna iray manontolo izy amin'ny rantsan-tànana iray. Raha jerena ny fahaiza-manao sy ny tanjaka ananany, dia afaka nivezivezy mora foana niaraka tamin'ny Hokages an'i Konoha tsirairay izy, na dia niaraka tamin'izy ireo tamin'ny tanjaky ny tampony aza.
Vakio ihany koa: Ny mods Fortnite Season 6 tsy navoaka dia mety hanova ny fomba fiasan'ny fiara amin'ny lalao
nahoana no fifandraisana mafy foana
very fahatokisana olona tianao
ahoana no ahalalanao fa tapitra ny fifandraisana
maninona izy no mibanjina ahy fatratra
ny fomba hialana amin'ny lehilahy manambady